Danayso mooyee, dan guudi dhimatay.
Saturday June 27, 2020 - 17:53:52 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Danayso mooyee, dan guudi dhimatay. Gobannimadi kadib, xukuumadahii talada dalka mayalka u soo qabtay ee maamulka u kala danbeeyay ee magaca RAYIDKA la siin jiray. Waxa ay ahaayeen xukuumado aan la tallaabsan karin oo aan daboolin karin, kana jawaabi karin dalabyadii iyo baahidii dadka. Musuqmaasuq, eex, xatooyo, iyo qaraabakiil ayaa ragaadiyay oo curyaamin ku keenay hawlahii xafiisyadii cusbaa ee dawladda. Candhuuf qallalan iyo doobi quus ah ayaa badiba dadku dib uga sii liqayeen hankii iyo yidaddiiladi gaadhitaanka gobonnimada lagu beegsanayay. Taaso keentay ugu danbayn in xukunkii ay la wareegaan ciidankii qallabka siday, taaso yaraysay baahidii dadweynahu ay qabeen.
Dawlad kasta oo RAYIDA oo inoo dhalataa tan iyo gobbonimadii kadib waa LIXDAN sanno kadib'e waxa banjariya oo lugaha u rogga musuqmaasuq baahsan iyo cid jeclaysi. Inta ka dheefdaa waa faro kutiris xaaraan-quutayaal ah. Dadkuna kama quustan ka mana qadh-gooyaan haddimada tuugta maalinba midi lasoo hor isdaagaayo anniga i cumaamada. Danayso mooye dan guudi dhimatay.
" Siyaasi, Wan qashaadi maadaa
Weger iyo ka waaweyn ".
Waa in aynu isweydiino 60 sanno kadib isbadal nooce ah ayaynu u baahanahay ? Nidaamka dawladnimo ee aynu rabnaana muxuu yahay .... .?.
Hadday dhimato tawfiiqdu
Tamar xooggu maahe
Ileen garashadaa taabta.
" Dhoodaan ".
Qore : nimcaan ahmed bihi